Njengoko usazi, ukubhloga kuyinto enkulu ukuthengiswa kokuqukethwe Umsebenzi kwaye kunokukhokelela kuphuculo lweinjini yokukhangela, ukuthembeka okunamandla, kunye nokubakho okungcono kwimithombo yeendaba zentlalo.
Nangona kunjalo, enye yezona zinto zinzima kakhulu kubloga kunokufumana izimvo. Izimvo zebhlog zinokuvela kwimithombo emininzi, kubandakanya unxibelelwano lwabathengi, imicimbi yangoku, kunye neendaba zeshishini. Nangona kunjalo, enye indlela efanelekileyo yokufumana izimvo zeblogi kukusebenzisa nje iGoogle entsha iziphumo ezikhawulezileyo Uphawu.
Indlela yokusebenzisa oku kukuqala ngokuchwetheza amagama aphambili ahambelana nomzi mveliso wakho, kwaye ubone ukuba yeyiphi iGoogle ekugcwalisela yona. Umzekelo, masithi uqhuba iblo yokutya kwaye ufuna izimvo. Nayi eminye imizekelo yokukhangela onokuyenza:
Ngokuchwetheza nje "ukutya ngaphandle" kwibhokisi yokukhangela, uyavezwa ngezinye umsila wegama elingundoqo iinketho ezinokuthi zijike zizihloko zebhlog. Nanku omnye umzekelo:
Ngokuqala nje ukukhangela kwakho "ngokutya", ufumana izimvo ezikhawulezileyo ezinokujika zibe zizihloko ezilungileyo. Umzekelo:
“Iiresiphi zenethiwekhi yokutya: into abangaxeleli yona kwiTV”
"Izikhokelo zepiramidi yokutya: udliwanondlebe neengcali ezintathu zokutya"
Ngokuqala isihloko sakho sebhloko kunye nale migqaliselo yokukhangela, ulungelelanisa isihloko sakho seblogi kunye namabinzana abantu abafuna ngokwenene, okwandisa amathuba akho okufunyanwa ngophando lweGoogle.
Ukuba uyabambeka kwaye awukwazi ukuza nesihloko sebhlog yakho elandelayo, yiya kuGoogle kwaye uphonsa amagama athile kuwo ahambelana nomzi mveliso wakho. Unokufumana ezinye izimvo ezilungileyo ezinokuphucula i-SEO yakho.
tags: UhlalutyoIziphumo zeshishiniUkusebenza kakuhleisininziisantya sephephaUphando lwezoPhandomarblesWordPress
Feb 20, 2011 ngo-8: 04 PM
Ndingumntu omtsha kwindawo yokubhloga (http://jasonjhr.wordpress.com/) kwaye ube nengxaki yokuza nemibono yeposi yebhlog. Eli liqhinga elihle lokunceda ukugxila kwiimbono ezithile, kwaye mhlawumbi ufumane ezinye ezintsha.
Ngaba ucinga ukuba ukwenza oku kuya kunceda nge-SEO kunye nokukhetha kwamagama angundoqo ngokunjalo?
Feb 22, 2011 ngo-2: 07 AM
Ndicinga njalo, kuba ulungelelanisa izihloko zebhlog yakho nophendlo oludumileyo kuGoogle. I-SEO ibandakanya iindawo ezininzi ezihambayo, nangona 🙂
Isidanga esinye seNtengiso
Mar 28, 2011 ngo 4:12 PM
Ufundeka kakuhle. Kubalulekile ukuba iinkampani ziqhubeke nokumpompa umxholo omtsha kunye nokuza nemibono emitsha yomxholo rhoqo kunokuba ngumngeni. Kubalulekile ukuhlala phantsi kwaye ucwangcise kwangaphambili, thatha ixesha kwaye ugxininise kwisicwangciso sakho somxholo. Ukusuka kwinqanaba likaGoogle ukuya kwikhonkco lokwakha, kulifanele ixesha kunye nomzamo!
Jul 10, 2016 ngo-8: 39 AM
Iingcebiso ezikrelekrele, ndikhetha ukuthatha izimvo kumava emihla ngemihla ukuze ndibonise eyona ndlela ikufutshane kakhulu yokufunda kwabafundi.